Fanehoan-kevitra isan-karazany manoloana ny drafitr’i Trinidad sy Tobago hampiaty ireo mpifindramonina Venezoeliana ho ara-dalàna · Global Voices teny Malagasy
Minisitry ny fiarovana: "Tsy karatra fivoahana ny fonja io'"
Voadika ny 10 Mey 2019 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Italiano, Ελληνικά, English
Ny tanàna amoron-dranomasin'i Cedros no toerana fidirana ara-dalàna akaiky indrindra ho an'ireo Venezoeliana tonga any Trinidad sy Tobago. Sary avy amin'i Grueslayer @Wikipedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Satria mbola miatrika hatrany ny krizy ara-politikany sy ara-tsosialy sy toekarena i Venezoela, dia miezaka mafy ihany koa ny firenena nosy kambana, Trinidad sy Tobago mitantana ny firohotr'ireo Venezoeliana mpifindramonina aterak'izany.
Miorina eo avaratr'i Venezoelà ihany i Trinidad – ao amin'ny toerana akaiky indrindra, 14km (8.7 maily) ny halavirana eo amin'ny firenena roa tonta – ary ho an'ireo Venezoeliana mandositra ny hasarotam-piainana sy ny herisetra, iray amin'ny toerana safidian'izy ireo i Trinidad. Ny sasany tonga amin'ny fomba miafina, ny hafa tonga amin'ny alalan'ny fidirana ara-dalàna ao amin'ny seranan-tsambo. Milaza ny tombatombana fa efa nandray mpifindra monina 60.000 be izao ny firenena, ary miha-mitombo ny isa. Ankoatra ny fisehoana miharihary kokoa, miloa-bava sy mavitrika ara-politika ny mponina Venezoeliana ao an-toerana, nanao fihetsiketsehana vao haingana tao an-drenivohan'i Trinidad izy ireo ho fanohanana ny fisokafan'ny mpitarika ny mpanohitra, Juan Guaidó amin'ny miaramila Venezoelana tamin'ny 30 Aprily.
Vao herintaona mahery lasa izay, tamin'ny volana aprily 2018, nobedesin'ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpitsoa-ponenana (UNHCR) i Trinidad sy Tobago noho ny fandroahana an-katerena an'ireo Venezoeliana 82 mpitady fialokalofana. Tao anatin'ny fanambarana ho an'ny UNHCR, nilaza ny governemanta fa na dia niditra tamin'ny Fifanarahana 1951 momba ny mpitsoa-ponenana aza izy, ary nanasonia ny Fifanarahan'ny firenena Mikambana Miady amin'ny fikambana-jiolahy “Transnational” sy ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana ho Fiarovana ny Zon'ireo Mpiasa Mifindra Monina sy ny Fianakaviany, “nanakana ny fampiharana ny fitsipi-piarovana sahaza ho an'ireo mpitsoa-ponenana sy ireo mpitady fialokalofana” ny tsy fisian'ny lalàna.
Politika vaovao momba ny fisoratana anarana
Ankehitriny, dia miezaka manitsy izany toe-draharaha izany ny firenena Karaiba, ka nankatoa politika fisoratana anarana ho an'ny mpitsoa-ponenana Venezoeliana ny governemanta tamin'ny volana aprily mba hahafahan'izy ireo mitady asa, ary manolotra famotsoran-keloka ho an'ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna (tsy manana antontan-taratasy). Milaza ny mpanohitra fa tsy novolavolaina tsara ny drafitra, saingy nanamarika ny Sampan-draharahan'ny varotra sy ny Indositria ao Trinidad sy Tobago fa “mahatonga soritrasa handraketana sy hanaraha-maso ireo mpifindramonina an'aliny” izany ary “manome azy ireo fahamendrehana amin'ny fiantohana fa ankatoavina ara-dalàna izy ireo, ka manakana azy ireo tsy hiharan'ny fanararaotana. “
Misy ny porofo fa nohararaotina ireo mpifindra monina Venezoeliana, indrindra fa ny vehivavy, saingy mampiahiahy ny olom-pirenena ao Trinidad sy Tobago ny heloka bevava feno herisetra, olana izay efa atrehin'ny firenena. Tamin'ny 4 aprily 2019, lehilahy Venezoeliana iray no maty voatifitra teo ivelan'ny tranoben'ny UNHCR ao amin'ny manodidina ny renivohitra, Port of Spain. Herinandro taty aoriana, ny 11 Aprily, dia nisy tifitra hafa nahafaty Venezoeliana iray teo akaikin'ny toeram-pivarotana lehibe feno olona nandritra ny ora fivezivezena amin'ny tolakandro.
Ny tranga toy ireo, ny tantara amin'ny media sosialy momba ireo Venezoeliana manamboatra kara-panondrom-pirenena Trinidad sy Tobago hosoka (izay nolavin'ny Vaomieran'ny Fifidianana sy ny Sisintany ao amin'ny firenena ny fahamarinany), ary ny fampitandremana fa hiteraka fitomboan'ny tahan'ny heloka bevava ao an-toerana ny fahatongavan'ireo vondrona mpanao heloka bevava Venezoeliana no nahatonga ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Stuart Young hanazava fa “tsy karatra fivoahana ny fonja ho an'ireo jiolahy” ny fepetra fisoratana anarana
Ny tranga iray tamin'ny faramparan'ny volana Aprily teo no nanasongadina ireo fihetsika isan-karazany teo an-toerana manoloana ireo Venezoeliana mpifindramonina. Tamin'ny 25 aprily 2019, maherin'ny 30 ireo Venezoeliana mpifindramonina natahotra hilentika rehefa nihitsoka tany anaty ranomasina manonja be telo maily miala ny morontsiraka Venezoeliana ny sambon'izy ireo. Feno fanehoan-kevitra ny fantsona media sosialy, ny sasany miara-miory amin'ny manjo ireo mpifindramonina, saingy maro ireo mankalaza ny zava-misy fa tsy tonga ao Trinidad ireo olona ireo.
David Abdulah, mpitarika ny antoko politika Hetsika ho an'ny Rariny Ara-tsosialy, nijanona mihitsy alohan'ny hilazana fa nanampy tamin'ny loza ny fanomezana famotsoran-keloka. Nolazainy anefa fa “nampiharina tamin'ny fomba tsy nety” ny politika.
Ao amin'ny lahatsoratra iray izay be mpankafy sady efa nozaraina imbetsaka, mpisera Facebook Tillah Willah tsy nahatàna ka nilaza ny esoeson'ny olom-pirenena ao amin'ny firenena naorina tamin'ny fanandevozana sy ny fiantoham-piantoka manesoeso ny loza toy izany:
Inona no lazainy momba ny fanabeazana azontsika, fa afaka mijery sy mihomehy izay milentika ny taranak'ireo izay tonga an-tsambo eto . Inona no lazainy ho an'ireo taolana tsy nisy naka izay very nandritra ny fiampitana mahatsiravina sy mampivarahotsana nandalovantsika, fa tsy menatra isika mitomany na misaotra mangina fa tafavoaka tsara ihany isika.
Iriako mba hiakatra ny Kala Pani [“Rano mainty”, miresaka momba ny fandraràna ny fiampitàna ny ranomasimbe taloha] ary hanadio ity faharatsiana mampahonena ananantsika ankehitriny ity.
Iriako mba hanipy ireo taolana tsy nisy naka eo amin'ny tarehintsika ny Olokun [Orisha, izay heverina ho mpitondra ny vatana rehetra ao amin'ny rano].
5 andro izaySuriname